ऋणबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस् – Sandesh Press
July 4, 2021 369
ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्रहको कारक मानिन्छ।
मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ।
यदी यी भाव र मंगलसँग शुभ ग्रहको दृष्टी पर्दा ऋण हुन्छ तर त्यसबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् मंगलबार र बुधबार धन लेनदेनसँग सम्बन्धीत काम कहिलै गर्न हुँदैन्।
Prevवैदेशिक रोजगारीले आशालाई दिएको पीडा : सडकमै जन्माइन् बच्चा, के हो उनको जिवनको कथा ?
Nextयस्तो हुन्छ धनी र सम्पन्न हुने मानिसको हस्तरेखा, तपाईको पनि छ की ?
अर्को साताबाट देशरभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी
मलेसियाबाट २४ वटा श’व ल्याएपछि क्याप्टेन लामाको प्रश्न : यो देश धनी र ठूलाबडाको मात्रै हो ?